Afrika, 01 September 2018
Ra’iisul Wasaaraha Biritan Theresa May ayaa soo gaba gabaysay booqasho saddex maalmood ah oo ay ku tagtay saddex waddan oo ka tirsan qaaradda Afrika, iyadoo booqashadii ugu dambaysay ku tagtay shalay dalka Kenya.
Warkii Ugu Dambeyay Weerarada Ajaanibta Lagu Hayo ee K.Afrika
Wararka ka imaanaya dalka Koonfur Afrika ayaa sheegaya in weli halkaasi ay ka sii socdaan boobka lagu hayo goobaha ganacsi ee ay leeyihiin dadka ajnabiga ah oo ay Soomaalidu ku jirto.
Cameroon: Iskuullo Xirnaa Sanado oo Dib-u-furmaya
Iskuullada ku yaalla gobollada afka Inigiirisiga looga hadlo ee dalka Cameroon ayaa u diyaar garoobaya inay dub u furaan waxbarashada markii ugu horeysay muddo laba sanadood ah.
Soomaali Lagu Boobay Koonfur Afrika
Dukaamo 20 ka badan ayaa lagu dhacay deegaanka Suweeto ee dalka Koonfur Afrika, kadib markii ay kusoo qamaameen boqollaal dhalinyaro ah oo kasoo jeedo dadka danyarta ah ee degan deegaanada ku dhow halkaasi.
Khartoum: Riek Machar oo Saxiixay Heshiis Nabdeed
Dhex dhexaadiye Sudaani ah ayaa sheegay in hoggaamiya mucaaradka ah ee Koonfur Sudan Riek Machar uu go’aansaday in uu saxiixo nuqulkii ugu dambeeyay ee heshiiska nabadda loogu soo dabaalayo dalka ay shanta sano dagaallada ragaadiyeen.
64% Madaxweynaashi Deegaanka Soomaalida oo Xabsi la Dhigey
Sida aad ka dhageysteen idaacaddahayagi intiini haleeshay, waxa xabsi ku yaalo magaalada Addis Abbaba loo taxaabey madaxweynihii hore ee deegaanka Soomaalida, Cabdi Maxamed Cumar.
Addis Ababa: Cabdi Maxamuud Cumar oo La Xirey
Wararka ka imanaya magaalada Addis Ababa ee xarrunta dalka Itoobiya ayaa sheegaya in xabsiga loo tabaaxay maanta madaxweynihii ee Gobolka Ismaamulka Soomaalida Cabdi Maxamuud Cumar iyo rag kale oo ka tirsan maamulkiisa.
Kenyatta: Ciidamadeenna Soomaaliya Way Sii Joogayaan
Madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayaa sheegay in ka bixitaanka ciidankiisa ee Soomaaliya ay ku xidhnaan doonto dhismaha ciidanka qaran iyo hay’adaha amniga ee Soomaaliya.
ONLF oo Faahfaahisey Xabad Joojin ay ku Dhawaaqeen
Taliye ka tirsan jabhadda ONLF oo la yiraahdo Cabdisamad Saxane Cumar ayaa faahfaahin ka bixiyey xabad-joojinta ay ururkaasi dhowaan ku dhowaaqeen kadib markii dawladda Itoobiya ay ururka ka saartay liiska argagixisada.
ONLF: Waan la Shaqeynaynaa Madaxweyne Cagjar
Ururka ONLF ayaa sheegay shalay inay si buuxda ula shaqaynayaan madaxweynaha cusub ee dowladda deegaanka Soomaalida, waxayse ka digeen faragelin dawladda dhexe ee Itoobiya ku samayso arrimaha Gobolka.